३३ किलो सुन प्रकरणः पूर्व एआईजी भण्डारीको बिश्लेषण - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
३३ किलो सुन प्रकरणः पूर्व एआईजी भण्डारीको बिश्लेषण
Posted by Milap Subedi | २२ बैशाख २०७५, शनिबार ११:२८ |
२२ बैशाख, काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रुपमा भित्रिएको ३३ किलो सुन प्रकरणमा प्रहरीका बहालवाला तथा पूर्व अधिकारीको सलंग्नता देखिएपछि नेपाल प्रहरी फेरि विवाद र बहसमा तानिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी उक्त घटना प्रकरणबारे विश्लेषण
अर्को कुरा अनुसन्धानले नै ठम्याएको चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ भन्ने जो व्यक्ति छ । त्यो गोरेसँग प्रहरी अधिकारीहरुको सम्पर्क थियो भन्ने कुरा आएको छ । त्यो सम्पर्क मात्रै थियो वा अरु पनि लेनदेन हो । त्यो स्पष्ट हुन बाँकी छ । साथै गोरेसँगको उठबसपछि प्रहरी अधिकारीको आर्थिक हैसियत बढेको पनि देखिएको छ । त्यसैले बाहिरबाट हेर्दा प्रहरी अधिकारीको दुई किसिमको सहभागिता छ । पहिलो केही इमान्दार प्रहरी निर्दोष ढंगले मुछिएका छन् । दोश्रो, चरणबद्ध तस्करीमा सलंग्न प्रहरी अधिकारी घटनामा सलंग्न छन् । एकातर्फबाट त यो कुराको वास्तविक घटनालाई पत्ता लगाएर दोषीलाई समात्ने, कारवाही गरेर घटनालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम प्रहरीले नै गरेको छ । केही प्रहरी अधिकारी तस्करसँग अपराधिक सञ्जालसँग जोडिएका हुन सक्लान् । तर यसैलाई हेरेर सबै प्रहरीलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्दा अरुलाई अन्याय हुन्छ । प्रहरी राज्यको एउटा संयन्त्र हो । यसलाई कसरी परिचालन गरिन्छ ? कसरी उपयोग गरिन्छ ? अनि कसरी दुरुपयोग गरिन्छ ? भन्ने हुन्छ ।
प्रहरी संगठनलाई शुद्धीकरण गर्न यस्ता घटनाले काम गर्छन् । प्रहरी संगठनलाई नयाँ परिस्थितिमा सुदृढीकरण गर्न पनि आवश्यक छ । अहिले प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । नयाँ जोस जाँगर छ । प्रहरीमा आएका युवाको नयाँ सोच, धारणा र नयाँ केही गरौँ भन्ने जुझारु नेतृत्वले पनि प्रहरी संगठन सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ । यसमा अहिले संघीयतामा पनि प्रहरीलाई सुदृढ गरेर व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । एउटा महत्वपूर्ण सन्देश पनि यो घटनाले दिएको छ की प्रहरीभित्र बर्दीको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई संगठनमा स्थान छैन् भन्ने पनि हो । जसले गर्दा यसरी पक्राउ परेर आन्तरिक रुपमा छानबिन भएर संगठनलाई बलियो बनाउँछ ।
अब यही घटना प्रकरणलाई हेर्ने हो भने आखिर प्रहरी त त्यहाँका अरु निकायहरु जहाँ यस्ता तस्करी नियन्त्रण गर्न स्थापना भएका निकायलाई सहयोग पु¥याउने मात्रै हो । तर त्यस्तो निकायले यत्रो सुन तस्करी हुँदा के हेरेर बस्यो त ? पहिला त सुन कसरी आयो ? विमानस्थलको अध्यागमन विभागले अहिलेसम्म के काम गर्यो त ? लगायत अरु कैयौँ अनुत्तरित प्रश्न पनि छन् । त्यसैले राज्यका हरेक संगठनभित्र आ–आफ्ना खाले शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्न यस्ता घटनाले सहयोग पु¥याउँछन् । तत्कालका लागि जनविश्वास गुमे पनि दीर्घकालीन रुपमा प्रहरीलाई सुदृढ गर्न र शुद्धीकरण गर्न यसले ठूलो सहयोग गर्छ । राजनीतिक व्यक्तिहरु, अपराधिक सञ्जालका पर्दा पछाडिका जुन खेलाडीहरु छन्, मुख्य खेलाडीहरु अझ । त्यो त अहिलेसम्म देखिएको छैन् । यो घटना तिनीहरुको निर्देशन, सहयोग, आवद्धताबिना सम्भवै छैन । कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले ती व्यक्तिहरुसम्म जबसम्म हामी पुग्दैनौँ, तबसम्म सतहमा देखिएका व्यक्तिलाई मात्रै कारवाही गरेर पुग्दैन, यस्ता अपराधिक सञ्जाल तोडिदैनन् ।
Previousराष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला विभाग कार्यसमिति गठन,अध्यक्षमा आचार्य
Nextरक्सी खाएर विद्यालय जाने शिक्षकको जागिर चट
बेरोजगार परिचयपत्र प्राप्त नागरिकलाई भत्ता !
२९ भाद्र २०७३, बुधबार ०७:२१
‘संयमित बनाउन योगले सहयोग पुग्ने’: नेता पौडेल
२५ फाल्गुन २०७३, बुधबार १३:१२
भारु साट्नका निम्ति सास्ती ! भारु साट्न जानेहरु लाईनमै निदाएउन वाध्य
७ पुष २०७३, बिहीबार १६:१२